Bogga ugu weyn Waa Maxay Caymiska Shaqo La'aanta Iyo Sida Loo Gudbiyo NJ
Caymiska shaqala'aanta (UI), waxaa badanaa loo yaqaan faa'iidooyinka shaqo la'aanta. Waa nooc ka mid ah caymis ay dawladdu maalgeliso oo toddobaad walba siiya lacag kuwa shaqadoodii waayey oo buuxiyey shuruudo gaar ah.
Kuwa shaqada ka tagay ama sabab wanaagsan loo eryay uma qalmaan macaashka shaqo la'aanta. Intaa waxaa sii dheer, haddii aan si kale u dhigno, qof shaqada laga joojiyay shaqo la'aan ku habboon awgeed oo aan khalad lahayn ayaa u qalma faa'iidooyinka shaqo la'aanta.
In kasta oo caymiska shaqo la'aanta uu yahay sharci federaal ah, gobol kastaa wuxuu maamulaa barnaamijkiisa. Intaas waxaa sii dheer, shaqaaluhu waa inay raacaan dhammaan shaqada iyo shuruudaha mushaharka ee gobolkoodu dejiyey, oo ay ku jirto waqtiga la shaqeeyay. Dawladaha dawlad -goboleedyadu waxay ugu horrayn mas'uul ka yihiin bixinta faa'iidooyinka, kuwaas oo ay taageeraan canshuuraha mushaharka ee si gaar ah loogu ururiyey ujeeddadaas.
Intii lagu gudajiray dillaaca coronavirus, dowladda federaalku waxay diyaarisay qodobo si ay uga faa'iideystaan ​​dadka Mareykanka ah ee shaqo la'aanta ah. Ka dib markii Madaxweyne Donald Trump uu saxeexay Xeerka Gargaarka Coronavirus, Gargaarka, iyo Amniga Dhaqaalaha (CARES) bishii Maarj 2020, faa'iidooyinkan dheeraadka ah waxay noqdeen kuwo waxtar leh.
Intaas waxaa sii dheer, waa la kordhiyay kadib markii Xeerka Qoondaynta Isku -dhafan ee 2022 la ansixiyay, waxaana mar labaad loo kordhiyay Maarso 11, 2022, markii Madaxweyne Joe Biden uu saxiixay $ 1.90 tiriliyan oo ah Xeerka Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka ee 2022. Faa'iidooyinka dheeraadka ah ayaa lagu wadaa inay dhacaan Sebtember 6, 2022.
Caymiska Shaqo la'aanta ee New Jersey
Barnaamijka caymiska shaqo la'aanta ee gobolka waxaa maamula Waaxda Shaqada iyo Horumarinta Shaqaalaha ee New Jersey. Waxaad dacwad ku xaraysan kartaa onlayn, telefoon ahaan, ama shakhsi ahaan mid ka mid ah 14 ka xarumood ee shaqo ee hal-joojin ah ee gobolka oo dhan. Haddii aad rabto inaad telefoon ku dalbato ama shakhsi ahaan, tag bogga xiriirka wakaaladda si aad macluumaad dheeraad ah u hesho.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad u qalanto dheefaha shaqo la'aanta ee New Jersey, badiyaa waxaa lagu siin doonaa 26 toddobaad. Intaas waxaa sii dheer, Xilliyada xiisadda dhaqaale, si kastaba ha ahaatee, dhammaan gobollada ayaa dooran kara inay dib -u -eegaan faa'iidooyinka, dowladda federaalku waxay gacan ka geysan kartaa maalgelinta dheefaha gobolka ee la dheereeyey.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad u dhigto shuruudaha soo socda, waxaad u qalmi kartaa magdhowga shaqo la'aanta ee New Jersey.
· Haddii lagugu eryey sabab la'aan. Sheegashadaada ayaa laga yaabaa inay dib u dhacdo ama la diido haddii aad si ula kac ah isku casishay sababo aan shaqo la xiriirin ama lagaa eryey anshax xumo. Si kastaba ha noqotee, haddii saacadahaaga la jaray waqti-dhiman, waxaad u-qalmi kartaa.
Waxaad kasbataa lacag kugu filan si aad u buuxiso shuruudaha aasaasiga ah.
Inta lagu jiro muddada sannadka aasaasiga ah, oo ah afartii ama shantii jadwalka taariikhda ugu dambaysay toddobaadkii aad samaysay dalabkaagii hore, waa inaad kasbatay ugu yaraan $ 200 toddobaadkii 20 toddobaad ama guud ahaan $ 10,000. Haddii aad macaashka dalbatay 30 -ka Abriil, tusaale ahaan, muddada saldhiggaagu wuxuu ahaan doonaa Janaayo 1 illaa Disember 31 ee sannadkii hore.
XIDHIIDHKA: Dab -demiyeyaasha Tabaruca ah Lacag ma helaan? Waxaan rabaa inaan noqdo mid
Si kastaba ha noqotee, macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dugsiga, saraakiisha shirkadaha, iyo milkiilayaasha meheradaha dhammaantood waxay leeyihiin shuruudo u -qalmitaan oo kala duwan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kiisaskaan, fiiri mareegaha gobolka.
Intee in le'eg ayaan heli karaa?
New Jersey, faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta waxaa badanaa lagu xisaabiyaa 60% celceliska dakhligaaga toddobaadlaha ah ee sannadka saldhigga ah, ugu badnaan $ 713 toddobaadkii. Iyada oo ku xidhan tirada ku tiirsanayaasha ee lagu sheegay arjiga, qaddarka faa'iidada toddobaadlaha ah ee ugu yar wuxuu u dhexeeyaa $ 120 illaa $ 138. Mar labaad, inta lagu jiro fasaxyada ama waqtiyada kale ee dhaqaale xumo, ugu badnaan ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan.
Waxaad u adeegsan kartaa xisaabiyaha dheefaha ee New Jersey si aad u go'aamiso lacag bixintaada suurtogalka ah.
Sida Loo Codsado Lacagaha Shaqo La'aanta ee New Jersey
Codsiyada Shaqo la'aanta New Jersey waxaa lagu soo gudbin karaa onlayn, telifoon, ama qof ahaan gudaha New Jersey. Haddii aad rabto in aad wacdo, xarumaha dib u shaqaalaynta waxay furan yihiin saacadaha 8 subaxnimo iyo 3:30 galabnimo Maalmaha shaqada, marka laga reebo maalmaha ciidaha, wakhtiga bari ayaa la isticmaalaa.
Kahor intaadan dalban nidaamka, waxaad u baahan doontaa inaad ururiso macluumaadka soo socda.
· Haddii aadan ahayn muwaadin Mareykan ah, sii lambarkaaga Sooshal Sakuuritiga ama lambarka Diiwaangelinta Shisheeyaha.
· Haddii aad lacag ka qaadato hawlgab ama 401 (k), sii macluumaadka koontadaada.
· Qaddarka iyo dhererka magdhawga kala -go'idda ee kasta oo aad xaq u yeelan karto loo -shaqeeyahaaga.
· Haddii lagaa rabo inaad dirto macluumaadka hoolka shaqaalaysiinta Ururka, oo ay ku jiraan lambarka deegaanka iyo cinwaanka, taariikhda aad filayso in dib looguugu yeero shaqadaada.
Haddii aad shaqaale u tahay urur shaqaale
Ciidan Haddii aad ka tirsanayd milatariga 18kii bilood ee la soo dhaafay, buuxi Foomka DD-214; haddii aad u shaqaysay dawladda, buuxi Foomka SF-8 ama SF-50.
Waa inaad sidoo kale soo gudbisaa magaca buuxa iyo cinwaanka loo -shaqeeye kasta oo aad u shaqaysay 18kii bilood ee la soo dhaafay. Sidoo kale adiga, Lambarka taleefanka loo -shaqeeyaha. Khibrad shaqo oo la leh shirkaddaas. Taariikhaha shaqadu waxay bilaabmaan oo joojiyaan taariikhda. Iyo Sababta kala tagga.
Si kastaba ha noqotee, si aad uga codsato websaydhka wakaaladda, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto koonto onlayn ah. Haddii aad ku dalbato taleefan ama qof ahaan, sameynta koonto onlayn ah ayaa kuu sahli karta inaad xaqiijiso u -qalmitaankaaga faa'iidooyinka shaqo la'aanta New Jersey toddobaad kasta. Nidaamkani wuxuu u baahan yahay xaqiijinta inaad si firfircoon u raadinayso shaqo cusub iyo inaad awoodi doonto inaad aqbasho dalab shaqo haddii mid kuu yimaado.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Helo Shahaadada Qorshaynta Maaliyadda
Ka dib markii aad xaraysay shaqola'aanta, ka fiirso foomamka Waaxda Shaqada boostada. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad raadsato shaqo cusub, fiiriso xulashooyinka tababarka, oo aad tustid dhammaan ballamahaaga qorshaysan, oo lagu samayn karo onlayn, taleefan, ama qof ahaan.
Sida lacag -bixinta looga sameeyo New Jersey
Waxaad haysataa laba ikhtiyaar oo aad ku heli karto macaashka shaqo la'aanta ee maaliyaddan: ku shubid toos ah koontada jeegga shakhsiyeed ama keydka ama kaarka deynta hore ee Bangiga America. Intaa waxaa sii dheer, deebaajiga tooska ah waa lacag la'aan, laakiin waxaa jira khidmado la xiriira kaarka deynta ee la sii diyaariyey, oo ay ku jirto 90-ka-ka-bixitaanka ATM-ka ka baxsan shabakadda haddii aad sameyso wax ka badan afar lacag-bixin bishii ($ 3 haddii ay tahay caalami), 2 % khidmadda macaamilka caalamiga ah, iyo khidmadda ilaa $ 10 kaarka beddelka ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad badiyaa heli doontaa dheefahaaga laba maalmood oo shaqo gudahood markaad xaqiijiso dheefahaaga haddii aad isticmaasho deebaaji toos ah. Ka sokow Kaarka horay loo sii bixiyay, dhanka kale, wuxuu qaadan doonaa toddoba ilaa toban maalmood oo shaqo si uu boostada ugu yimaado.
Intaa waxaa dheer, dheefaha shaqo la'aanta ee New Jersey waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirada toddobaadyada aad shaqeysay muddadii sannadka aasaasiga ah, ugu badnaanna 26 toddobaad haddii aan la dheerayn masiibo dhaqaale awgeed.
Gargaarka Shaqo La'aanta ee New Jersey waa la joojin doonaa haddii aad shaqada ku laabato ka hor inta muddada macaashka ugu badan aysan dhammaan. Waa inaad wacdaa ama gasho xisaabtaada onlayn wakhtigaas oo aad keentaa macluumaadka soo socda. Magaca loo -shaqeeyahaaga cusub, cinwaanka, iyo lambarka taleefanka. Taariikhda aad ku soo noqotay shaqada, tirada saacadaha aad shaqaysay, iyo mushaharkaaga guud ee wakhtiga ilaa aad bilowday shaqada cusub. Oo haddii aad ku guul darreysato inaad buuxiso shuruudaha dib -u -xaqiijinta toddobaadlaha ah ama aad ka soo qaybgasho shirarka loo igmaday, waad ka tagi kartaa dheefahaaga.
Shaqo la’aantu waxay horseedi kartaa walaac iyo cabsi weyn. In kasta oo faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta ee NJ aysan ku filnayn beddelka dakhligaaga oo dhan, waxay kaa caawin karaan yareynta saameynta maaliyadeed ee luminta shaqadaada. Waqti qaado si aad u ogaato haddii aad u qalanto kadibna buuxi codsi si aad u hesho gargaarka aad u baahan tahay.
Sidee COVID-19 u saameysay faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee New Jersey?
Faafida coronavirus waxay culeys saartay dhaqaalaha Mareykanka, iyadoo malaayiin qof ay xareysteen faa'iidooyinka shaqo la'aanta New Jersey dhowrkii toddobaad ee ugu horreeyay ee dillaacay. Xeerka Gargaarka Coronavirus, Gargaarka, iyo Xeerka Amniga Dhaqaalaha wuxuu bixiyaa xoogaa faa'iidooyin shaqo la'aan ah marka lagu daro kuwa ay bixiso gobolka New Jersey, waxaana laga yaabaa inaad u qalanto inaad hesho dheefahaas dheeraadka ah.
Waa kuwan qaar ka mid ah qodobbada sharciga cusub;
· Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto 13 toddobaad oo dheefaha ah.
· Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto $ 600 dheeraad ah toddobaadkii marka lagu daro lacag -bixintaada caadiga ah ee gobolka. Maskaxda ku hay in macaashkan la joojin doono July 31, 2020.
Dadka sida caadiga ah aan u -qalmin faa'iidooyinka shaqo la'aanta ayaa hadda u -qalma. Haddii aad tahay qandaraasle madaxbannaan, shaqsi iskiis u shaqeysta, ama shaqaale gig, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho oggolaansho.
Intee in le'eg ayay tahay inaan sugo ka hor intaanan codsan gargaarka?
Haddii aad shaqadaada ku weydo COVID-19, waa inaad isla markiiba codsataa. Muddo sugitaan hal toddobaad ah ayaa guud ahaan loo baahan yahay, laakiin Guddiga Shaqada ee Texas ayaa ka reebay kuwa shaqadooda ku waayey COVID-19.
Maxaa dhacaya haddii sheegashadayda la diido?
Websaydka wakaaladda, waxaad ka hubin kartaa heerka sheegashadaada. Si aad u hesho cusboonaysiin, waxaad u baahan doontaa inaad soo gudbiso magacaaga, Lambarka Bulshada, iyo taariikhda dhalashada.
Intaas waxaa sii dheer, waad gudbin kartaa rafcaan oo aad soo bandhigi kartaa kiiskaaga haddii gobolku diido sheegashada dheefaha shaqo la'aanta ee New Jersey. Waa inaad ku xaraysaa racfaankaaga todoba maalmood oo taariikheed gudahood markaad heshid warqadda go'aaminta ama toban maalmood oo taariikheed gudahood laga bilaabo markii la soo diray si aad diidmada ugu horraysa u noqoto mid kama dambays ah - waxaad heli kartaa ka -reebitaan shuruuddan haddii aad muujin karto sabab wanaagsan.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad racfaankaaga ku soo gudbiso onleenka ama boostada. Inta aad sugayso jawaab, sheeg sababta aad u diidan tahay go'aanka ah in aad macaashka iska joojiso oo aad sii waddo caddaynta faa'iidooyinka shaqo la'aanta New Jersey ee toddobaadlaha ah. Haddii rafcaankaaga la oggolaado, waxaa lagu siin doonaa dhibco toddobaadyadaas. Sidoo kale, hubso inaad timaadid dhammaan ballamaha wakaaladda ee jadwalka ah.
Goorma ayay macaashkaygu dhammaadaan?
Faa'iidooyinka Shaqo la'aanta New Jersey waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirada toddobaadyada aad shaqeysay muddadii sannadka aasaasiga ah, ugu badnaanna 26 toddobaad haddii aan la dheerayn masiibo dhaqaale awgeed. Haddii aad shaqada ku laabato kahor dhammaadka muddada macaashka ugu badan, waxaad waayi doontaa macaashkaaga shaqo la'aanta.
Sida Loo Gudbiyo Shaqo La'aanta PA
Sida Loo Gudbiyo Codsiga Shaqo La'aanta
U Xareyso Shaqo La'aanta Illinois
Sida Loo Gudbiyo Shaqo La'aanta Texas
Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta NYS
25 Xarunta Ugu Mushaarka Badan NFL | Dalalka Ugu Fiican
Iyadoo inta badan wadamada ay kubada cagta ku ciyaaraan lugahooda, kubada cagta inta badan waxaa lagu ciyaaraa gacmo gudaha United…
Intee in le'eg ayay Servers ka kasbadaan USA? | Adeegayaasha ugu mushaarka badan 2022
Waa hagaag! Waxaad dhammaysay waxbarashadaadii ama aad si fudud uga tagtay buulkii qoyska si aad ugu noolaato riyadaada Maraykanka…
Waa la soo dhaafay waagii uu ciidanku ahaa dabadhilifyada. Si la mid ah macalimiinta, waxaan nidhi abaalkooda waa…
Takhasusyada Dhakhtarka Maskaxda ee Ugu Mushaharka Badan Caalamka | Xirfadaha Dhakhtarka Sare ee 10 ee Mushaharka leh
Cilmi-nafsiga waa laan ka mid ah dawooyinka diiradda saaraya ogaanshaha, daaweynta, iyo ka-hortagga xanuunada maskaxda, shucuureed, iyo dabeecadda. A…